IL-76 MD cusub / dhibaatooyinka flaps Waan kaheli karaa habka aan udajiyo duubista! Bilood 11 5 maalmood ka hor #1465
Dhowr maalmood ka hor waxaan soo degsaday IL-76 MD oo aad u qurux badan oo leh VC, diyaarad aad u fiican oo aad u wanaagsan oo loo sameeyay FSX, dhibaatada kaliya (oo ay igu kiciso waalan!) ayaa ah inaanan geeyn karin guryaha loo yaqaan 'Flaps', habka ma heli karo, waana mid aad u jahwareersan!
Haddii uu qof i caawin karo anigu aad ayaan u mahadcelin doonaa!
IL-76 MD cusub / dhibaatooyinka flaps Waan kaheli karaa habka aan udajiyo duubista! Bilood 10 2 maalmood ka hor #1485
Aniga aniga ilaaliyaasha qaar ayaa waalan
IL-76 MD cusub / dhibaatooyinka flaps Waan kaheli karaa habka aan udajiyo duubista! Bilood 9 3 todobaad ka hor #1493
Biriiga wuxuu joogaa had iyo jeer waana inaan rakibo diyaaradda.